Orgaanizimoota - Wikipedia
Baayoloojii keessatti, orgaanizimii waan lubbu qabeessa kamiyyuu yoo ta'u kunis warra lafee dugdaa qaban, ilbiisota, biqiltootaa fi baakteeriyaa dabalata. Orgaanizimoonni hundi ergaa alaa dhufuuf (stimuli) deebii kennuu, wal-horuu, guddachuu fi dagaaguu, fi of-tooachuu (homeostasis) danda'u.
Orgaanizimiin seel-qeenxee ykn kan seelii tiriliyoona baayyee qabu ta'uu danda'a; warra seelii baayyee qaban keessatti seelin gurmaa'ee tishuu fi qaama uuma. Orgaanzimoonni seelii tokkoo ol qaban seel-hedduu jedhamu.
Orgaanizimiin pirookaariyootis ykn yuukaariyootis ta'uu danda'a. Pirookaariyootisiin doomeenii lama qaba: baakteeriyaa fi arkiyaa. Orgaanizimoonni yuukaariyootis niwukilasii seelii kan membireeniin marfamee fi kutaalee seelii kan biraa kan meebireenin marfame qabu (biqiltootaa fi bineeldota keessatti maayitookondiriyaa, biqiltootaa fi algee keessatti pilastiidsi, isaan hunduu indoosimbaayootiik baakteeriyaa irraa dhufan jedhamee yaaddama). Faangasiin, bineeldonnii fi biqiltoonni mootummaa orgaanizimoota yuukaariyootis jalatti ramadamu.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Orgaanizimoota&oldid=26044" irraa kan fudhatame
Last edited on 3 Fulbaana 2014, at 11:55
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 3 Fulbaana 2014, sa'aa 11:55 irratti.